Choice Hotel Comfort Suites Paradise Island izay tsy nisy fiatraikany mafy tamin'ny tafiodrivotra farany teo
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Choice Hotel Comfort Suites Paradise Island izay tsy nisy fiatraikany mafy tamin'ny tafiodrivotra farany teo
Ny Nosy Suites Suites Suites ao Bahamas dia anisan'ny ankamaroan'ny hotely Karaiba izay tsy nisy fiatraikany mafy tamina tafio-drivotra tato ho ato ary mandray ireo mpitsidika.
Comfort Suites Paradise Island, mpikambana ao amin'ny Choice Hotels International, Inc., fianankaviambe manana ny maha izy azy, dia anisan'ny ankamaroan'ny hotely Karaiba izay tsy nisy fiantraikany mafy tamin'ny oram-baratra farany teo ary mandray ireo mpitsidika hiditra amin'ny vokatra fandraisam-bahiny malaza eran-tany. .
Ilay trano fandraisam-bahiny malaza rehetra dia nitatitra fa taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Irma namakivaky ny Nosy The Bahamas tamin'ny volana septambra, dia tsy nahazo fahasimbana ilay trano satria tsy nisy fiantraikany mivantana tamin'i New Providence sy Paradise Island ny rivodoza Irma. Noho izany, taorian'ny nanesorana ireo fampitandremana dia "niverina haingana tamin'ny fomba fiasa mahazatra izahay, namita ny ezaka fanadiovana taorian'ny rivodoza ary nanohy ny hetsika hetsika hotely mahazatra rehetra", hoy ny tatitra nataon'i Jermaine Wright, Tale Jeneralin'ny Comfort Suites Paradise Island. Nanamarika ihany koa i Wright fa nampahery ny famandrihana rehefa niomana tamin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ny hotely.
Naneho firaisankina amin'ireo toeran-kaleha voadona any Karaiba, anisan'izany ireo faritra any Bahamas izay tratran'ny tafio-drivotra, i Wright nidera ny hetsika "One Caribbean Family" an'ny Fikambanana Caribbean izay mamela ny trano fandraisam-bahiny manerana ny faritra hanampy ireo izay voadona mafy Ny rivodoza Irma sy Maria, raha nanasongadina ihany koa fa maherin'ny 70 isan-jaton'ny toerana any Karaiba no tsy voa ary vonona handray ireo mpitsidika toy ny mahazatra.
Nomarihiny fa ny Bahamas dia mahatakatra ireo fanamby sy sakana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tafio-drivotra manimba, izay niaina ny rivodoza Matthew tamin'ny taon-dasa.
Nanamarika ihany koa i Wright fa ny fananan'ny fianakaviana dia mahazo isa naoty ambony momba ny fahafaham-po ho an'ny vahiny miaraka amin'ireo mpitsidika izay mitatitra matetika fa ny fahaiza-mandray vahiny ao amin'ilay toeram-pandraisana dia nahatonga azy ireo “hahatsapa ho toy ny fianakaviana”. Ny tompony dia mifamatotra akaiky amin'ny vokatra hotely, manohana ny ekipa natokana ary miantoka ny fanavaozana sy ny fikojakojana hatrany ny vokatra mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria. "Manosika ny mpiasa izahay, izay mirehareha amin'ny fananana sy ny fomba itondranay ny vahiny," hoy izy.
"Vao avy nahavita ny ezaka nohavaozina izahay izay mitentina 300,000 $ ho fanavaozana ny habaka an-tokotany, ny pisotro ary ny dobo eo an-kianjan'i Crusoe's Restaurant," hoy ihany izy, ary nanambara fa ny fandaniana amin'ny fanamboarana ankehitriny dia mihoatra ny $ 10 tapitrisa ho an'ny trano iray manontolo.
Ny Comfort Suites Paradise Island dia manohy manavao sy manitatra ny vokariny, ao anatin'izany ny traikefa momba ny sakafo sy zava-pisotro misy azy, izay manasongadina ny sonian'ny marika marika Suites Suites feno sakafo maraina mafana sy mafana.
“Hotely fampiononana Suites Suites misy fahasamihafana izahay,” hoy i Wright, nanazava fa ny Crusoe's Restaurant dia manolotra menio fisakafoanana mihamitombo sy safidy fisakafoanana kanto. Ao amin'ny Comfort Suites Paradise Island, ny mpitsidika zaza voasoratra anarana rehetra dia misakafo antoandro sy misakafo hariva maimaim-poana rehefa misakafo miaraka amin'ny olon-dehibe efa misoratra anarana.
Ireo vahiny ao amin'ny Comfort Suites Paradise Island koa dia afaka mampiasa ny dobo filomanosana, manasa amoron-dranomasina, casino, Lazy River Ride ary ny slide amin'ny rano ao amin'ny Atlantis Paradise Island, izay eo akaikin'ny Comfort Suites. Miaraka amin'ny tombony ankatoavina amin'ny fanaovan-tsonia, ny vahiny ao amin'ny Suites Suites koa dia afaka mankafy ny trano fisakafoanana sy ny efitranon'i Atlantis.
Sekretera SADC hanohanana ny RETOSA amin'ny paikady marketing fizahan-tany
Nahazo ny loka nasionaly ny hetsika fiarovana ny seranam-piaramanidina Belfast City